Zvese zvaunoda kuti uzive nezve iyo nyowani iPhone 7 | IPhone nhau
Zvese zvaunoda kuti uzive nezve iyo nyowani iPhone 7
Mushure memwedzi yakawanda yerunyerekupe, Apple yakazivisa zviri pamutemo iyo iPhone 7. Nguva pfupi yapfuura kuunza iyo iPhone 6s gore rapfuura, makuhwa ekutanga uye pfungwa dzakatanga kutenderera nezve izvo iyo iPhone iyo iyo Cupertino-based kambani yakangounza ichave yakaita sei. Imwe yeiyo kutanga runyerekupe rwakaratidza kuti iyo iPhone 7 yaizoramba mvura uye guruva, runyerekupe rwakazopedzisira rwasimbiswa, neIP67 certification.
Kana isu tikataura nezve mifungo yatakaburitsa nezve ichi chishandiso chitsva, chekutanga chese chakaburitswa muna Gumiguru gore rapfuura, pfungwa yakatiratidza iyo iPhone 7 ine skrini yakavhara iyo yese kumberi uye uko bhatani rekutanga rakanyangarika zvachose.
Kana tikamira kuti tione makuhwa ese atakaburitsa gore rese rapfuura, tinogona kuona kuti mamwe acho akazove echokwadi sei, nepo mazhinji haana kupfuura kupfuura fungidziro yeavo vakaiburitsa. Muchinyorwa chino tinomisa runyerekupe uye tinokuzivisa iwe nezvenhau dzese Apple ichangobva kuburitsa muhotera yeBill Graham muguta reSan Francisco, mune hurukuro umo Apple yatora mukana wekutanga chizvarwa chechipiri cheApple Watch, chizvarwa chechipiri chinosvika pamusika gore risati rapera kuyedza kutora mukana wekutengesa kweKisimusi, imwe yenguva dzakakosha kumakambani mazhinji ehunyanzvi uye uko Apple isingatadze.
1 IPhone 7 yekunze dhizaini
1.1 Mvura uye guruva nemishonga
1.2 Kwete headphone jack
1.3 Vatauri vaviri vane ruzha rwe stereo.
1.4 Enderera bhatani rekutanga
1.5 Antenna mabhendi
1.6 7000 dzakateedzana aruminiyamu
1.7 Hapana kubhadharisa induction kana kubhadharisa nekukurumidza
2 IPhone 7 skrini
3 IPhone 7 kubatana
4 IPhone 7 kamera
4.1 IPhone 7 pamberi pekamera
4.2 7-inch iPhone 4,7 kamera
4.3 IPhone 7 Plus Kamera
5 IPhone 7 Kuchengetedza
6 IPhone 7 mavara
8 IPhone 7 uye iPhone 7 Plus mitengo
9 Wakaita sei mutengo weiyo iPhone 6 uye iPhone 6s?
9.1 Mitengo ye iPhone 6 mushure mekutanga kweiyo iPhone 7
9.2 Mitengo ye iPhone 6 Plus mushure mekutanga kweiyo iPhone 7 Plus
9.3 Mitengo yeiyo iPhone 6s mushure mekutanga kweiyo iPhone 7
9.4 Mitengo yeiyo iPhone 6s Plus mushure mekutanga kweiyo iPhone 7
10 Kuwanika kwe iPhone 7 uye iPhone 7 Plus
IPhone 7 yekunze dhizaini
Ichitevera dhizaini yeavo vakafanotungamira, iPhone 7 inogara nhaka yakasviba Unibody dhizaini, iyo inoipa iyo inonakidza kwazvo kutaridzika uye kunzwa. Iyo dhizaini mukuenzanisa neye yapfuura mamodheru akasiyana zvishoma asi zvinonyanya kuchengetedza aesthetics.
Mvura uye guruva nemishonga
Pakupedzisira Apple yakasarudza kuwedzera chitupa chepamutemo chinobvumidza iyo iPhone 7 kuti ive isingagadzirike kune zvese mvura uye guruva, chinhu chinonyanya kudiwa nevashandisi. Apple haifanirwe kushanda zvakanyanya mune izviKubva modhi yapfuura, yaikwanisa kumira kweawa rakanyudzwa pasina kutambura kukuvara kudiki mukushanda kwayo kwemukati. Iyo IPX 7 certification inotibvumidza isu "zviri pamutemo" kunyudza chishandiso kwemaminitsi makumi matatu kusvika pakadzika mita imwe.
Kwete headphone jack
Iyo iPhone 7 sezvataona mune yakakosha uye mumifananidzo inoenderana nechinyorwa ichi, haina inoratidzira iyo chaiyo iPhone dhizaini shanduko ine nhamba nyowani, asi panguva ino tinogona kuona kunaka kweiyo iPhone nyowani yakafanana kana ikasawanikwa kune iyo modhi yakavhura iyo iPhone 6 nhepfenyuro, iyo yakabudirira ma6 uye ikozvino iyo iPhone 7.
Ichitevera mukurumbira uyo kambani yeCupertino-yakavakirwa mukurasa tekinoroji yakapararira, Apple yakasimudza pa 3,5-millimeter jack. Musiyano mukuru watinowana uye unosvetukira kuziso rakashama ndiko kubviswa kwakazara kweiyo headphone jack, kubviswa uko kwakabvumidza iyo kambani kurasikirwa kunyange huremu hwakawanda kana zvichibvira chishandiso icho chaive chatove chakatetepa uye chakasununguka kupfeka (zviri pachena kwete nekuda kwekukora kwayo).
Kubviswa kweiyo jack kubatana kwa "kumanikidza" kambani ku tangisa iyo yakawanda-runyerekupe AirPods, mahedhifoni asina waya anotipa anosvika maawa mashanu ekuzvimirira kusingamisidzike.
Vatauri vaviri vane ruzha rwe stereo.
Kunyangwe paine runyerekupe rwekuti Apple yaizotora mukana weiyo jack nzvimbo kuwedzera mutauri mutsva, chinhu hachina kunge chakanyatsoita seizvozvo, kubvira chaizvo ehe wawedzera mutauri mutsva, asi pamusoro pechigadzirwa, ichitipa isu 50% simba rakawanda uye nezwi rinoshamisa.
Enderera bhatani rekutanga
Bhatani repamba richiripo, kunyangwe paine runyerekupe rwekuzivisa kunyangarika kwayo, nekuda kwehunyanzvi hwakapihwa neTouch tekinoroji yakabatana naSiri, bhatani iri rauya kuzotamba diki basa pachinhu, asi Apple haikanganwe nezvayo uye yakazvimutsiridza nekupa basa nyowani umo bhatani iri inzwa yekumanikidza iyo inobvumidza kuwedzera mabasa eiyo 3D Kubata tekinoroji. Kugadziridza uku kwaidikanwawo kuitira kuti mvura isapinda muchina izvozvi sezvo ichirwisa mvura uye guruva neIP67 certification.
Imwe shanduko yatakaona muiyo iPhone 7 ndiko kutamiswa yemitsetse yaimhanya ichitevedza kumashure kwemamodheru apfuura uye iyo yaishandiswa senge antenna kuvandudza kugamuchirwa kwechigadzirwa. Iye zvino mitsara iyi yave iri pamucheto wechigadzirwa, ichienda isingazivikanwe nemushandisi. Vanhu vazhinji vanoti mabhendi ekumashure echishandiso akaaita akashata uye yakange yave nguva yekuti kambani ibvise, pfungwa yandisina kumbobvira ndanzwisisa kubvira pandakagara ndichiona mabhendi acho sechikamu chekushongedza kuseri kwe mudziyo.
7000 dzakateedzana aruminiyamu
Zvakare Apple yadzoka kubheja pane iyo aluminium yeiyo 7000 akateedzana, chiwanikwa chakatangwa mushure mematambudziko dhizaini anopiwa neiyo iPhone 6 Plus. Iyi alloy ndiyo inonyanya kusagadzikana iyo yanga ichishandiswa kusvika ikozvino mune chero chishandiso uyezve, iri kushandiswa neruzhinji rwevagadziri vema smartphone vanoita zvigadzirwa zvavo nealuminium. 7000 aluminium yakafanana neiya inoshandiswa muindasitiri yemuchadenga, nekuda kwesimba rayo uye kureruka.
Hapana kubhadharisa induction kana kubhadharisa nekukurumidza
Induction kuchaja chave chinhu chiri kuramba chiripo mumadhigiramu epamusoro, asi vakomana vanobva kuCupertino havatomboishandisa. Nekubviswa kweiyo Apple headphone jack Ndingadai ndakatora mukana uye ndakasanganisira iyi sarudzo, nekuti kana isu tichida kuteerera kumimhanzi uye kuchaja chishandiso panguva imwe chete, pane iyo iPhone 7 ichave isingakwanise kunze kwekunge isu tasiya mari pane isina waya bluetooth mahedhifoni.
Chimwe chinhu chitsva chaive chakamirirwa nevashandisi vazhinji kwaive kugona kwekambani kushandisa hurongwa hwekuchaja nekukurumidza, hurongwa hwaizotibvumidza kuti tikurumidze kuwana mwero unopfuura unogamuchirwa munguva pfupi, senge parizvino uchinakidzwa neSamsung S7 uye Cherechedzo. 7. Saka ikozvino kana tichida kukurumidza kubhadharisa yedu terminal tinofanirwa kuramba tichishandisa iyo iPad charger.
IPhone 7 skrini
Kuramba kweiyo iPhone skrini, kunyanya iya yemamodheru achangoburwa nekambani pamusika, yakagara ichizivikanwa nekupwanya, saka vashandisi vazhinji vakasarudza kushandisa girazi rakadzikama pachiratidziri. inodzivirira chidzitiro chedu kifaa pane chero kudonha. Panzvimbo pekushandisa safire, iyo yaisimudza mutengo wechigadzirwa, Apple inoenderera ichishandisa kristaro inogadzirwa kuburikidza nekaviri ion kuchinjana maitiro, iyo inopa yakasimba kuramba yakasimba padanho remolekyuli.
Iyo skrini yeiyo nyowani mamodheru eApple ikozvino 50% yakajeka kupfuura yaakatangira, ichiitendera kuti iratidze mamwe akajeka mavara. Nezve kugadziriswa kweiyo nyowani iPhone 7 uye iPhone 7 Plus, tinogona kuona kuti Apple yakachengeta zvakafanana nemhando dzapfuura mune iyo iPhone 7 Plus inotipa resolution ye1.920 x 1.080 uye iyo iPhone 7 ichave nesarudzo ye1.334, 750 x 9,7. Chinhu chitsva chikuru icho Apple mune izvi inyaya yeChiratidzo cheToni, inochinja tembiricha yemavara zvinoenderana nenzvimbo mwenje, yakafanana inoshandiswa muiyo XNUMX-inch iPad Pro uye iyo inotipa ratidziro shoma kupfuura iwo masikirini anoshandiswa kusvika ikozvino nekambani yeCupertino-based.
Apple inotevera tisingatore mukana wekuwedzera iyo skrini kumucheto kwechigadzirwa, chimwe chinhu chatove chakajairika mune mazhinji emafoni ekumusoro-soro asvika pamusika mumwedzi yapfuura uye iyo inobvumidza hupamhi hwechigadzirwa kuderedzwa nemamirimita mashoma, chimwe chinhu chingadai chakaitwa nekutora mukana we kubviswa kweiyo headphone jack.
IPhone 7 kubatana
Hutsva hukuru iyo iyo iPhone 7 inotipa isu ndiko kubviswa kweiyo 3,5 mm jack kubatanidza, kuchisiya chete mheni yekubatana mune chishandiso, chinongedzo chatinozochaja chishandiso mukuwedzera pakukwanisa kuteerera mimhanzi nekuda kwemahedhifoni mhando iyi yekubatanidza iyo Apple inosanganisira pamwe neiyo iPhone 7. Asi zvakare, kune vese avo vashandisi vane 3,5-millimeter mahedhifoni uye vasina kuronga kuvabvisa, iyo Cupertino-based kambani Wedzera mheni kune 3,5mm jack adapta mubhokisi.
Runyerekupe Smart Connector yekubatanidza inowanikwa pane iyo iPad Pro mamodheru uye ayo anogona kunge ari dzidziso anogona kuwanikwa pane iyo iPhone 7 Plus, haina kunge pakupedzisira yakasimbiswa. Mhando iyi yekubatanidza ingadai yakatibvumidza isu kubatanidza zvishandiso kune iyo iPhone pasina kukosha kwekushandisa mheni kubatana, kunyanya patinenge tichichaja chishandiso uye isu tichida kuteerera kumimhanzi kubva kuchinhu chedu, chimwe chinhu chingagadziriswa neiyo Smart Connector yekubatanidza ichibvumira isu kubhadharisa iyo iPhone kuburikidza neiyi kubatana.
IPhone 7 pamberi pekamera
Apple yakagadziridza yekumberi kamera yeiyo iPhone 7 kuita vhidhiyo mafoni uye selfies pkubvira mashanu megapixels kusvika ku5, pamusoro pekusanganisira inosimbisa dhijitari.
7-inch iPhone 4,7 kamera
Iyo 7-inch iPhone 4,7 kamera yakagadziridzwa zvachose kusanganisira yakawanda-inoshuvira nyowani Optical Image Stabilizer. Asi kwete chete iyo kamera yakagadziridzwa zvizere asi zvakare Apple yakagadzirisa iyo yapfuura flash kubva ku2 maLED kuenda ku4, iyo inotipa isu 50% kumwe mwenje patinoishandisa. Yemhando yemifananidzo yakagadziridzwa zvakanyanya pamusoro penzvimbo dzediki-mwenje uye isina-mwenje.
Iyo yakawanda-runyerekupe mbiri kamera yeiyo iPhone 7 Plus yakazosimbiswa. Apple inoshandisa maviri makamera mune 5,5-inch modhi, yakafara kona uye imwe lens iyo inokutendera iwe kutora zvimwe zvinhu zviri kure. Mhedzisiro yezvakatorwa zvinotipa mifananidzo ine hudzamu hwenzvimbo iyo kare yataigona kungowana chete kana tikaswedera padyo nechinhu chemufananidzo kana kana takatamira kure zvakakwana.
Asi pamusoro pezvo, iyo mbiri kamera inotibvumidza kuwana yakajeka uye yakajeka mifananidzo, nekuti ese ari maviri makamera anowana iwo mavara neimwe nzira uye achiasanganisa iwo mune imwechete kubata. Kuti ugone kubata zvese zvakatorwa neiyi mbiri kamera, iPhone 7 inotarisirwa ne3 GB ye RAM, nepo iyo 4,7-inch modhi ichienderera ichinakidzwa ne2 GB ye RAM iyo iyo yapfuura modhi yakaburitswa.
Iyo iPhone 7 flash yakagamuchirawo hukuru hwekuvandudza, kuenda kubva ku2 LEDs kusvika ku4, ichipa kaviri mwenje kana uchipfura nharaunda dzine rima pane neiyo iPhone 6s.
Chekupedzisira, runyerekupe rwekuti iyo mbiri kamera yeiyo iPhone 7 Plus yakatibvumidza kuve neinotarisa zoom, yakasimbiswa, sezvo iyo nyowani iPhone 7 Plus inosangana, nekuda kwemakamera maviri, zoom ye1 kukudza, zvishoma pane chinhu, nepo nekushandisa software, tinogona kusvika padyo nechinhu kusvika kagumi.
IPhone 7 Kuchengetedza
Kunyangwe zvikonzero zvisina musoro uye zvisina musoro izvo Apple yakaedza kururamisa chokwadi chekuti yakaramba ichipa 16 GB modhi, zvinoita sekunge pakupedzisira kambani yakaziva kuti iri kuzviita benzi pachayo nekupa saizi yekuchengetedza, iyo yakamboisa iyo inoshanda sisitimu yakaramba ichingori pamusoro pe10 GB. Kuvhurwa kweiyo iPhone 7 kwareva kubviswa kweiyo 16 Gb modhi, yekupinda modhi mumakore achangopfuura kune iyo iPhone renji.
Iye zvino iyo yekupinda kana yekutanga modhi iri 32 GB yekuchengetedza. Kubva ipapo tinokwira kusvika ku128 GB kune zana euros. Iyo modhi ine hukuru hukuru ndeye 100 GB imwe, yatichazofanira kubhadhara mazana mairi euros kupfuura eiyo 256 GB modhi.
Mushure mekumisikidzwa kweiyo iPhone 7 ine yakanyanya kuchengetera huwandu hwe256 GB, iyi modhi nyowani inova iyo modhi iyo parizvino inopa yakanyanya kugona yemukati pamusika, ndiko kuti, pamutengo unopunyuka mumaoko evashandisi vazhinji vangangoda kuzvitenga. Iyi terminal inoitirwa vashandisi ve pro nevaya vane hukuru hwekuchengetedza zvido, nepo iyo yekupinda-chikamu 32GB modhi inogona kuzove yekutengesa zvakanyanya iyo yaimbove 64GB modhi.
IPhone 7 mavara
Mwedzi mishoma yapfuura, runyerekupe rwakasimuka pamusoro pekugona kweApple kuwedzera imwe nyowani kune iyo iPhone renji, Yakadzika Bhuruu, rakasimba bhuruu bhuru iro ratingaone mune kumwe kududzira, zvaitaridzika kunge zvakanaka kwazvo. Asi pakupedzisira runyerekupe urwu rwashanduka rukave rwakafanana nemamwe makuhwa, kuva pasina. Zvakadaro, kambani yakawedzera maviri matsva mavara kune iyo iPhone 7 renji: inopenya nhema uye nzvimbo nhema. Ruvara rwekupedzisira runouya kuzotsiva zvachose Space Grey, modhi iyo, kubvira payakatangwa pamusika, yakagara ichinyanyisa. Saka iPhone 7 icharova pamusika nemavara mashanu akasiyana: Glossy Nhema, Dema, Pinki, Goridhe, uye Sirivheri.
Ruvara rwakwezva kutarisisa ndiGlossy Nhema, inoshandiswa mumifananidzo mizhinji. Sezvineiwo uyu muvara HAUNA kuwanikwa mune 32GB vhezheni, kumanikidza mushandisi kuchinjira kune ingangoita 128 GB kana achida kana kana iri kara pane yake nyowani iPhone 7
Mukati meiyo nyowani iPhone 7 tinowana iko kunonzwisisika kushanduka kweanogadzira akagadzirwa nekambani pachayo. Iyo itsva A10 processor, iyo yakagadzirwa chete neTSMC, inotipa kuita 40% yakakwira kupfuura yakatangira iyo, iyo A9. Iyo A10 Fusion ipurosesa ine ina cores, maviri ayo akatarisana nekuita kwechigadzirwa uye mamwe maviri akagadzirirwa kuchengetedza simba.
Mukuwedzera iyo GPU nyowani iri 50% nekukurumidza Kupfuura iyo yakatangira uye mukati medu tinogona kuwana yakanyanya kuwanda simba rekushandisa pane iyo inopihwa neA9 yeiyo iPhone 6s uye 6s Plus.
IPhone 7 uye iPhone 7 Plus mitengo
7 GB iPhone 32: 769 euros
7 GB iPhone 128: 879 euros
7 GB iPhone 256: 989 euros
iPhone 7 Plus 32GB: 909 euros
iPhone 7 Plus 128GB: 1.019 euros
7GB iPhone 256 Plus: 1.129 euros
Wakaita sei mutengo weiyo iPhone 6 uye iPhone 6s?
Nguva dzese kambani painomutsiridza zviteshi zvayo, mutengo wemamodeli aive pamusika unoderedzwa, uri mukana wevashandisi vatsva kupinda muApple ecosystem vachiisa mari shoma. Tingaite sei kutarisa mutengo wematerminal aya nerimwe gore uye maviri zvakateerana pamusika Iwo ari pamitengo inodhura kwazvo yeruzhinji ruzhinji.
Apple yakatakura zvakananga iyo iPhone 6 uye iPhone 6 Plus renji uye yakachinja sarudzo dzekuchengetera dze iPhone 6s uye 6s Plus, ichipa 32 GB modhi uye 128 GB imwe.
Mitengo ye iPhone 6 mushure mekutanga kweiyo iPhone 7
iPhone 6 16GB: Haisati yatengeswa
iPhone 6 64GB: Haisati yatengeswa
6GB iPhone 128: Haisati yatengeswa
Mitengo ye iPhone 6 Plus mushure mekutanga kweiyo iPhone 7 Plus
iPhone 6 Plus 16GB: Haisati yatengeswa
iPhone 6 Plus 64GB: Haisati yatengeswa
iPhone 6 Plus 128GB: Haisati yatengeswa
Mitengo yeiyo iPhone 6s mushure mekutanga kweiyo iPhone 7
6 GB iPhone 32s: 659 euros
6 GB iPhone 128s: 769 euros
Mitengo yeiyo iPhone 6s Plus mushure mekutanga kweiyo iPhone 7
6GB iPhone 32s Uyezve: 769 euros
6GB iPhone 128s Uyezve: 879 euros
Kuwanika kwe iPhone 7 uye iPhone 7 Plus
Ino nguva Apple inovhura iyo nguva yekuchengetedza munaGunyana 9, kugoverwa muzvitoro zvepanyama munaGunyana 16. Iyo nyowani iPhone 7 inosvika kunhamba huru yenyika pazuva iro, chimwe chinhu icho Apple changa chisina kujairwa mukuburitsa kwazvino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Zvese zvaunoda kuti uzive nezve iyo nyowani iPhone 7
Julian Fernandez akadaro
Asi ivo havataure kuti mutengo uchave nemadhora….
Pindura Julian Fernandez
asi hapana iphone 6s ye32GB ingadai isiri 64GB.
Apple yakagadzirisa zvivakwa pane iyo iPhone 6s uye ikozvino inopa iyo 32GB uye 128GB modhi.
Zvakare taura kuti processor nyowani ine 4 cores, maviri ekushanda kwepamusoro uye maviri ekunyanyisa simba kuponesa, zvakare kusvikira iFixit isingazvidanidzi pachayo kana rimwe peji rakasarudzika haizokwanise kuziva zvechokwadi kuti yakawanda sei RAM ine 7 uye 7 uyezve zvichiteerana. Sezvo yatove kuchengetera iyo 7gb nhema 128 pamwe (kwete kubwinya), iwo maspika stereo anofanirwa kurira zvikuru.
Zvinozivikanwa here kana kunyangwe kuve mutete iwo ma iPhone 6 kesi anogona kushandiswa ne7 ye4,7?
Iyo iphone 7 inouya yemahara kune chero anoshanda pasi kana kusara sepakutanga kuti iwe unofanirwa kubhadhara yakawanda
Iyo Goridhe Master inouyawo kune macOS Sierra, tvOS 10 uye watchOS 3
Apple inoburitsa iOS 10 Goridhe Master kune vanogadzira